Kalluumeysiga Malaayiin Milyan | Martech Zone
Talaado, Agoosto 25, 2009 Monday, August 24, 2009 Adam Yar
Maalin dhaweyd waxaan la qadeynay koox dad ah oo inta badan ka shaqeysa wakaaladaha xayeysiinta, pr iyo shirkadaha suuq geynta.
Douglas Karr, Aasaasaha of the Martech Zone, ayaa kooxda kala hadlayey baraha bulshada iyo 'isticmaalkeeda aalad suuqgeyn ah. Mid ka mid ah waxyaabaha uu sheegay ayaa runtii igu dhuftay xadhig.
Waxaan ku celcelinayaa… Doug wuxuu yidhi xayeysiintu waxay ahaan jirtay mid fudud, waxaad haysatay dhawr warbaahin oo waaweyn (Daabac, TV, Raadiye) oo aad wax ka iibsan karto oo waxay ahayd inaad sameyso oo dhan ayaa ahayd inaad ogaato inta boqolkiiba miisaaniyadaada mid kastaa helay . Waxaad ahayd asal ahaan kalluumeysiga macaamiisha badweynta.
Hadda oo leh warbaahinta bulshada, marketing mobile, Blogs, baraha bulshada iyo dhammaan hababka kale ee isgaarsiinta cusub kalluumaysiga kuma sii jiri doontid badaha dhexdooda.
Suuqleydu waxay hadda haystaan ​​malaayiin harooyin ah oo ay ka kalluumaystaan. Sida kalluumeysiga, waxaad waqtigaaga iyo dadaalkaaga ku lumin kartaa dhammaan meelaha qaldan. Sidoo kale, sida kalluumeysiga oo kale, waxaad u baahan tahay inaad hesho dhexdhexaad (harooyin) kuu shaqeeya oo aad diiradda saarto kuwaas.
Waxaan u maleynayay inay tani tahay isbarbardhig weyn oo loogu talagalay suuqgeynta adduunka maanta. Suuqgeynta internetka iyo warbaahinta bulshada waxay keeneen isbeddel aasaasi ah oo ku saabsan habka macaamiisha ay filayaan isgaarsiinta.
Shirkaddiina wali ma isku dayeysaa inay ka kalluumeysato badda?